May Nyane: September 2017
" စိတ်ကူးယဉ်ကြရအောင်လား ဂျွန်ရေ…"
ဘယ်သူဟာ သေခြင်းအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်လဲ စဉ်းစားရင် ပထမဆုံး သတိရတာ.. ခင်ဗျားပါပဲ ဂျွန်.. Kurt Cobain လို သေခြင်းကို ကိုယ့်ဘာသာ မရွေးချယ်ခဲ့ပေမဲ့ အနုပညာ နဲ့ လူသားဖြစ်တည်မှု ကို ခန့်ညားလေးစားတဲ့ ခင်ဗျားဟာ သေခြင်းအတွက် အဆင်သင့် ရှိနေခဲ့ ပြီးသားလို့ ယုံတယ်.. ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချစ်တာဟာ လူသားဖြစ် တည်မှု ကို ချစ်တာပဲဆိုတာ.. ခင်ဗျားပြလို့ ကျမ တွေ့ခဲ့တာ သိလား။ ဘာအရေးကြီးလဲ စဉ်းစားတော့ ဒီကနေ့ ကို တည့်တည့် ရင်ဆိုင်ဖို့သာ အရေးကြီးတာလို့ ကျန်ရစ်သူ ယိုကိုဆီက ကျမ ရတယ်။
ယိုကိုကြောင့် Beatles တွေ ပြိုကွဲခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲရင် ကျမကတော့ လက်မခံချင်ပါဘူး။ လူ တစ်ဦး တစ်ယောက်ကြောင့် ဂီတ အမြုတေကြီးတစ်ခု ပြိုကွဲခဲ့တယ်တဲ့လား.. ဒါဆို ရော့ခ် ဘုရင် ၄ပါး ရဲ့ ဂီတ ဂုဏ်သိက္ခာ နဲ့ ချစ်ခြင်းတရားရဲ့နက်ရှိုင်းမှုကို ထိခိုက်ပါ့မယ်… ။ အချစ် ဆိုတာရယ်.. အနုပညာ ရယ်ဟာ တူတူပဲ.. တခါတလေမှာ နားလည်ရ ခက် လောက်အောင် လျို့ဝှက်တယ် .. မဟုတ်လား..။ တခါတလေမှာ အနုပညာဆိုတာ .. အချစ်ဆိုတာတွေက သူ့ဘာသာ သီးခြားဖြစ်တည် တတ် ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဂျွန် နဲ့ ယိုကို နှစ်ယောက်တည်းဟာ အနုပညာဖြစ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အနုပညာကို အခြေခံတဲ့ အချစ်နဲ့ပဲ စစ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေ.. ကမ္ဘာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေ အတူတူ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အရေးကြီးတာက ဂီတ နဲ့ အနုပညာ နဲ့ သူတို့ရဲ့ အချစ်နဲ့ လောကကို သာယာစေခဲ့ဖို့ပဲ မဟုတ်လား။ ရပါပြီ.. ဂျွန် နဲ့ ယိုကိုကို ကြည်ဖြူလို့ ရပါပြီ။ ဘာမှ များများ မတွေးဘဲ နေကြစို့။
လောကထဲ နေရထိုင်ရ ခက်လာရင်လည်း ခင်ဗျားကိုပဲ သတိရတာပဲ ဂျွန် .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခင်ဗျားနဲ့ ယိုကို ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ကြ တယ်။ ခင်ဗျား ယောဂကိုလည်း တွေ့ခဲ့တယ်.. ယောဂီ ကိုလည်း ကြုံခဲ့တယ်..။ ကြေကွဲ နာကျင် ရတာတွေ ကြေမွ ပျောက်ရှရတာတွေ .. ကိုယ့်ကိုယ် ကိုအတွက် လုပ်ချင်တာလုပ် တာတွေ.. လူသားတွေ အပေါ် ထားတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ အချစ်တွေ.. ။ ခင်ဗျားဟာ အနုပညာပါပဲ ဂျွန်.. ။ ဒါနဲ့ .. ခင်ဗျား သစ္စာရော မဲ့ခဲ့ဖူး သလား..။ သစ္စာမဲ့ ခံခဲ့ရဖူး မှာတော့ သေချာသလောက်ပဲ … ။ အနုပညာသမားမှန်ရင်၊ တစုံတယောက်.. ဒါမှမဟုတ်.. ဒါ့ထက်မကရဲ့ သစ္စာဖောက်မှုကို ခံခဲ့ကြရတာ လောကနိယာမ တစ်ခုလိုပါပဲ။ အဲဒီ သစ္စာ ဖောက် ခံရမှုကို အံတုတဲ့ အနုပညာတွေ ဖန်တီးနိုင်ရင် ဒါ အမြတ်ပဲနော်။
ဂျွန်ရယ်.. ခုထိတော့ ကျမ နှလုံးသားမှာ ဘယ်အရာကမှ ခင်ဗျားရဲ့ Imagine ကို မကျော် နိုင် သေး.. ခင်ဗျားပြောခဲ့ဖူးသလိုဆို ခင်ဗျားရဲ့ ယိုကိုဆီက မြစ်ဖျားခံတာပါဆိုတဲ့ Imagine က ခုထိ ကျမကို တမြည့်မြည့် နာကျင်နေစေဆဲ…။ အို.. လူအများ ကြီးကို နာကျင်နေစေ ဆဲလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ I'm not the only one … I hope someday you'll join us .. ဆိုသလို။
ဂျွန် .. ခင်ဗျား စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သလို ဘာတိုင်းပြည်.. ဘာနယ်နိမိတ်.. ဘာလူမျိုး.. ဘာ ဘာသာရေး အစွဲမှ မရှိတဲ့ ကမ္ဘာ ဆို ရင် သိပ်နေလို့ ကောင်းမှာပဲလို့..။ ဒါပေမဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ တရားကိုယ် သဘော တော့ ရှိဖို့ လိုမှာပေါ့ နော်။ ဒါမှပဲ လူတိုင်းက ဘာကိုမှ မမက်မော.. မလုယက်.. မဖျက်ဆီး .. ခိုက်ရန် မဖြစ်.. မသတ်မဖြတ် ဘဲ ငြိမ်းချမ်းခြင်းထဲ မွေ့လျော်လို့ အနုပညာ တွေသာ ဖန်တီးကြမယ်.. မကောင်း ဘူးလား..။ အနုပညာသမားစစ်ရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချစ်မှာပဲ လို့လည်း ယုံတယ်..။ ဟုတ်တယ်မို့လား ဂျွန် …။
ဒီလို တွေးလို့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လှတယ်လို့ ဝေဖန်ကြမယ်ဆိုလည်း ဒီလို ငြိမ်းချမ်းကြည်လင်တဲ့ စိတ်ကူးမျိုးကတော့ ယဉ်ကြရုံပေါ့ ဂျွန်ရယ်.. လက်တွေ့အဖြစ်အပျက်အားလုံးရဲ့ အစ က စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းပဲ မဟုတ်လား။ အနည်းဆုံး စိတ်ကူးယဉ်ဖြစ် ပြီဆိုရင်ကိုပဲ .. အစ တစ်ခု ပျိုးပြီ မဟုတ်လား။
ဒါကိုသာ နားလည်နိုင်ပြီ ဆိုရင်တော့ ကျမတို့အားလုံး သီချင်းတပုဒ်ကို အတူဆိုလိုက်ကြဖို့သာ..။
ဒါပေမဲ့ ဂျွန်ရေ… ခု ကမ္ဘာကြီးကတော့ဖြင့် ကြာလေလေ.. ပိုဆိုးလေလေ..။ ငြိမ်းချမ်းမှုဟာ နေရာ အနှံ့မှာ အခြိမ်းခြောက် ခံနေရတယ် … ။ မေတ္တာတရားက အစော်ကား ခံနေရ တယ်..။ ဂုဏ်သိက္ခာ တွေက အလှောင် ပြောင် ခံနေရတယ်…။ နည်းပညာအောက်မှာ အသိပညာတွေက မှိန်ဖျော့..။ လက်နက်မျိုးစုံအောက်မှာ လူ့အသက်တာ ဆိုတာတွေ က စမ်းသပ်ပစ်ကွင်းတွေဖြစ်လာ..။ တန်ဖိုး ဆိုတာကလည်း အဖိုးတန်မှု မဟုတ် တော့။ အချစ်ဆိုတာက အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းနဲ့ လောဘ.. လို့ အဓိပ္ပါယ် ထွက်လာပြီ။ ပိုဆိုးတာက တချို့ အနုပညာတွေကို ဟားစရာ ရှုတ်ချစရာလို့ သတ်မှတ် လာကြတဲ့ ကိစ္စပဲ.. ။ ပြောကြတာတော့ ကမ္ဘာကြီးက ရွာကြီးဖြစ်လာပြီဆိုပဲ ဂျွန်ရယ်..။ အင်း ကျမ မြင်တာတော့ ကမ္ဘာကြီးက ရွာလောက်သာသာ နီးစပ်လာချိန်မှာ အမုန်းမီးတွေ အလွယ်တကူ ကူးစက် လာတာကိုပဲ မြင်ပါတယ်။ မေတ္တာတရား ကတော့ဖြင့် ကူးစက် ခဲလေခြင်း ဂျွန်ရေ…။
ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းတွေ မတော်လောဘတွေ ဝေးရာ.. တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် သွေးသား ရင်းလို ချစ်ကြည်ကြဖို့ရာတဲ့လား…။ ဂျွန်ရေ… ခုတော့.. ကျမမှာ ဂျွန့်ကို လွမ်းဆွတ်ရတာ ကလွဲလို့ ဖြေ ပြေစရာမရှိ…။
ဗုဒ္ဓကတော့ ပြောထားတယ် ဂျွန်.. ကိုယ်တစ်ဦးချင်း ကောင်းဖို့ အဓိက လုပ်ပါ တဲ့။ ဟုတ်တာပေါ့ နော်.. အဲလို လူအများကြီးက တစ်ဦးချင်းကောင်းဖို့ လုပ်လာရင် လူကောင်းတွေ အများကြီး အများကြီး ရှိလာ မှာ။ အဲလိုနည်းနဲ့ပဲ တစက်တပေါက်ချင်း စုရာက အေးမြတဲ့ ရေပြင်ကြီး.. သဲတစ်ပွင့်ချင်း စုရာက သာယာ ပြန့်ပျူးတဲ့ သဲသောင်ပြင်ကြီးလို… ပျော်စရာ ကမ္ဘာကြီး ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်..။
ဒါပေမဲ့ ဒီလို စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက် မျိုးတော့ လူတိုင်း လူတိုင်း လူတိုင်း ကို မက်စေချင်တာ မဟုတ်လား ဂျွန်….
ဒီနေ့တွေမှာ သိပ်လွမ်းတာပဲ ဂျွန် ..
စိတ်ကူးယဉ်တတ်တဲ့ ကျွန်မက ခုနေ ဂျွန်သာ ရှိနေသေးရင် .. ယိုကို နဲ့ တွဲလို့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အဖြူရောင်တွေ လွှမ်းခြုံထားမယ့် တနေရာရာမှာ အဝတ်ဖြူတွေ ဝတ်လို့ပဲ.. Imagine သီချင်းကို စန္ဒယားတီးပြီး ဆိုရင်း ဆန္ဒပြဦးမယ်လို့ ယုံတယ်။ အဲလိုဆို ကျွန်မလည်း ဂျွန့်အနား အရောက်သွားပြီး ပူးပေါင်းအားဖြည့်မယ်.. ဒါဟာ အနုပညာသမားတို့ရဲ့ ယုံကြည်ရာပဲ မဟုတ်လား ဂျွန်..။ အဲလိုနဲ့ပဲ ခင်ဗျားကို ပိုသတိရတော့တာပဲ ဂျွန် .. ခင်ဗျားရော .. ကောင်းကင်ဘုံမှာ နေလို့ ပျော်ရဲ့လား ဂျွန်…
၂၈ ဇွန် ၂၀၁၇။
John Lennon ရဲ့ ၇၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ (အောက်တိုဘာ ၉ ရက် ၁၉၄၀) အတွက် သတိတရ… Idea Magazine